विश्वास गर्नुहुन्छ ? विश्वकै धनी जोडी जो भाँडा माझेर जिवन चलाउँछन् « Etajakhabar
विश्वास गर्नुहुन्छ ? विश्वकै धनी जोडी जो भाँडा माझेर जिवन चलाउँछन्
प्रकाशित मिति : २६ असार २०७६, बिहीबार १९:१९
एजेन्सी । मानिस अलिकति सम्पन्न हुनासाथ विलासी बस्तुहरुको चाहना राख्छ । घरमा नोकरचाकर र गाडी घोडा राख्ने इच्छा हुन्छ । तर विश्वकै धनी व्यक्ति जसले उदाहरण पेश गरेका छन् । उनीहरुले साधारण ब्यक्तिले जस्तै आफ्नो जिवन ब्यतित गरेका छन् भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक विल गेट्स र उनकी पत्नीले सामान्य जिवन ब्यतित गरेका छन् ।
मेलिण्डा गेट्स बिल गेट्स की पत्नी हुन् । उनले विवाह गरेको २५ वर्ष बितिसकेको छ । यि दम्पत्ती विगत २५ वर्षदेखि हरेक राति भाँडा माझ्दै आइरहेका छन् । आफ्नो खाना आफै पकाउँछन् । दैनिक जिवनमा पर्ने आफ्नो ब्यक्तिगत काम आफै गर्छन । धेरैले सोच्छन् धनि व्यक्तिहरुको जीवनल निकै तामझामका साथ बित्छ । उनीहरुले केही काम गर्दैनन् । घरमा काम गर्नेहरु प्रशस्तै हुन्छन् । प्रशस्तै आराम मिल्छ भन्नेहरुको लागि यो जोडी यस्तो उदाहरण बनेको छ । जसले आम मानिसले झै साधरण जीवन बिताएका छन् । उनीहरु प्रायः आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् अनि सँगै भाँडा माझ्छन् ।